Home Wararka Gudaha Wararkii ugu dambeeyay Xil. Kulane Jiis oo Xasan Sheekh iyo Mahad Salaad...
Wararkii ugu dambeeyay Xil. Kulane Jiis oo Xasan Sheekh iyo Mahad Salaad ku eedeeyey ‘arrin halis ku ah’ naftiisa
– Xildhibaan Cabdullahi Kulane ayaa soo saaray qoraal uu ku cadeynayo in lagala noqday ilaaladiisii oo labo ka mid ah maanta la xiray, iyagoo doonaya inay garoonka Aadan Cadde diyaarad ka raacaan.
Sida ay ogaatay radiohalgan.com, ilaaladaan ayaa fasax la’aan uga dhoofi rabay garoonka, waxayna iska dhigayeen ciidan boolis ah, gaar ahaan qeybta daraawiishta, iyagoo hubeysnaa qoryaha fudud.
Xogta ay heyso radiohalgan.com waxay intaas ku dareysaa in askarta la xiray oo gaaraya labo askari ay kamid ahaayeen shan askari oo hoos tageysay Nabad-sugida qeybta guud ee gobolka Banaadir, isla markaana si leexsan ilaalo ugu ahaa Xildhibaan Cabdullaahi Kulane.
Previous articleWararkii ugu dambeeyay Ciidanka NISA oo howlgal qorsheysan ka fuliyay Gobolka Gedo
Next articleMaxkamadda Ciidamada oo xukuntay Nin Mooto Bajaaj qarax ku keenay Muqdisho